မရေးချင်ပေမဲ့ရေးလိုက်ရတယ် ………… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မရေးချင်ပေမဲ့ရေးလိုက်ရတယ် …………
Posted by fatty on Aug 17, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 32 comments
ကျနော် ဒီအကြောင်း ရေးသင့်မရေးသင့် စဉ်းစားနေတာ အတော်ကြပြီ …။
လူတစ်ယောက်အကြောင်းပါ ..။ တလောက Sunday talk ကြည့်လိုက်မိတော့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်
ကျနော်တွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုး ဖြစ်နေတော့ … ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်မကောင်းလှပေတဲ့
တနည်းတနည်းနဲ့ပညာပေးရာတော့ ရောက်မှာပါဘဲလေ ဆိုပြိးရေးချလိုက်ရတော့တယ် ….။
မိန်းမပျိုလေးများ အိမ်ထောင်ပြုဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါ ရုပ်ချောသူ ငွေကြေးချမ်းသာသူ … အစရှိသဖြင့်
သူ့အရွယ်လိုက်ပြီး … သူ့အတွေကအကြုံလေးအလိုက် စဉ်းစားကြတဲ့အကြောင်း …
အဲဒီထဲမှာမှ တာဝန်သိသော ယောကျာင်္းမျိုး ဆိုတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုး အနည်းငယ်သာရှိကြောင်း ဆွေးနွေးသွားတာပါ။
ကောင်းပါတယ် … ဆွေးနွေးခန်းလေးက ..။
ကျနော်သိတဲ့မိသားစုလေးတစ်စုအကြောင်းကို ဖွဲ့နွဲ့မနေတော့ဘဲ ရိုးရိုးလေးဘဲတင်ပြလိုက်ပါတော့မယ် ..။
ဖြစ်ရပ်မှန်လဲဖြစ်တယ် ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလဲရှိတာမို့ … အထူးအဆန်းရယ်လို့တော့မဟုတ်လှပါဘူး။
အများးအမြင်မှာတော့ သူဌေးလေးတစ်ယောက်လို့ အထင်ခံနေရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရျိတယ် …။
အသက် ၃ဝ ကျော်လောက်ထိတော့ ပုံမှန်မိသားစုဘဝလေးပါဘဲ မရှိမရှားလေးပေါ့ ..။
သူ့မှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ် အကြီးမလေးက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူအပျိုလေး ..။
အငယ်ကတော့ ဒီနှစ် ၁ဝ တန်းဖြေမဲ့ကျောင်းသားလေး ..။
အဖေဖြစ်သူက ကန်ထရိုက်တယောက်နဲ့တွဲမိသွားပြီး သူလဲကန်ထရိုက်အဖြစ် အဆောက်အဦတွေစဆောက်ပါတော့တယ် ..။
အမေဖြစ်သူက သူများဆီကနေငွေအရင်းအနှီးကို သိန်းထောင်ချီယူလိုက်ပြီး အတိုးပြန်ပေးတယ်။
ရှစ်ကျပ်တိုးယူပြီး ငွေရှင်တွေကို ၅ ကျပ်တိုးနှုန်းနဲ့ပြန်ရှင်းတယ်။ သူက ၃ ကျပ်စားပေါ့။
အမေဖြစ်သူရဲ့လုပ်ငန်းလေးက ပုံမှန်တော့လည်ပတ်နေတာပေါ့။ တခါတလေလည်း အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတာမျိုးရှိပါတယ်။
အတိုးယူထားသူက ပြန်မဆပ်ချင်လို့ရှောင်နေတာတို့ အတိုးမှန်မှန်မဆပ်တာတို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ ရှေ့နေရှေ့ရပ်တွေနဲ့
တရားရင်ဆိုင်ရတာတွေလဲရှိရဲ့ ဒါပေတဲ့ သူတို့အဖေကနာမည်ကျော်ရှေ့နေကြီးတစ်ယောက်ဆိုတော့ ဖြေရှင်းနိုင်ကြပါတယ် ..။
ဘဝဇာတ်ကြောင်းပြောင်းချင်တော့ …. သူများကိုငွေချေးမဲ့အစား ယောကျာင်္းလုပ်သူက သူ့ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းမှာ ငွေထည့်ဖို့
သူ့မိန်းမကိုဆွယ်တော့တယ် ..။ သမီးအပျိုလေးကလည်း အရွယ်ရောက်လာတော့ တင့်တောင့်တင့်တယ် ယောကျာင်္းလေးနဲ့တွေ့အောင်
ငါတို့မိသားစုလည်း အဆင့်မြင့်မြင့်နေနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ ….။
သူတို့မိသားစု အဆင့်မြင့်သွားတာတော့အမှန်ပါဘဲ .. အဆောက်အဦ် ိတွေဆောက်ရောင်း ကြိုပွိုင့်နဲ့ပေါ့…။
ငွေစကြေးစလေးရွှင်လာတော့ … ပြဿနာကစပါပြီ ..။
ယောကျာင်္းတချို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း … သာယာမှုအသစ်ကိုရှာလာတယ် ..။
ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း သူဌေးလေးလို့မြင်နေကြပြီဆိုတော့ … စပွန်ဆာရှာနေတဲ့ ကောင်မလေးငယ်ငယ်နဲ့ငြိသွားရောဆိုပါတော့ ..။
မိသားစုအတွင်းမှာပြဿနာ ကြီးလာပြီပေါ့ … ။ သမီးလုပ်သူအပျိုလေးကလည်း အမျိုးကောင်းသားလေးတစ်ဦးနဲ့ ရီးစားဖြစ်နေရာက
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူထားကြပြီ။ အငယ်လေးကလည်း ၁ဝ တန်းဆိုတော့ စာကိုဘဲအာရုံပြုနေရာကနေ …
တနေ့တနေ့မူးပြီးပြန်လာတဲ့အဖေဖြစ်သူနဲ့ အမေနဲ့ရန်ပွဲတွေ တစတစ များလာတော့အာရုံမရတော့ဘူး ..။ စာမကျက်တော့ဘူး ..။
ကြားထဲက ကလေးတွေ မြေဇာပင်ဖြစ်ကြရပြီ ..။
အဖေဖြစ်သူကလည်း ငါကအလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးလုပ်နေတာ ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ကားကောင်းကောင်းတစ်စီးဝယ်စီးလိုက်တယ်။
ကားကလေးနဲ့ သားသမီးတွေ ကျူရှင်အပို့အကြိုတောင် လုပ်မပေးဖြစ်ဘူး … တခါတခါ နောက် စမောလေးနဲ့ ကားပေါ်မှာ …
ကလေးတွေက တွေ့သွားတာကိုး …။ နေ့တိုင်းမူးပြီးအချိန်နောက်ကျမှပြန်လာတဲ့အဖေ ..။ အိမ်ကကားကို သူတို့တောင်မစီးရဘဲ
နောက်မိန်းမကိုတင်ပြီး လမ်းသလားနေတဲ့အဖေကို မကျေနပ်ကြတော့ဘူးလေ ..။ အဖေလုပ်သူကလည်း စီးပါွးရေးသမားကြီးပုံစံနဲ့
ဖုန်းအကောင်းစား ဈေးကြီးကြီးဝယ်ကိုင်တယ် ..။ ဘယ်ဟာမဆို branded မှ ..။ ငွေကို မိန်းမပြန်မအပ်တဲ့အပြင် မိန်းမဆီကယူထားတဲ့
အဆုံးသပ်စာရင်းရှင်းကြတော့ … မိန်းမဆီကယူထားတဲ့ငွေ သိန်း၅၀ဝ ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့အပြင် သူ့ဖာသာ သိန်း ၅၀ဝ အကြွေးတင်နေလေရဲ့
စမောလေးကသူ့မယူရင် လျှော်ရမယ်ဆိုလို့ လျှော်လိုက်ရဆိုဘဲ …။
ပြဿနာကြီးလာတော့ ဖက်တီးတို့ဆီ ရောက်လာပါရော အမျိုးတော်တာကိုး …။ ကဲမိသားစုတွေ တပြုံလုံးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းကြလင်းကြ
လုပ်ကြရပြီပေါ့ …။ အဖေဖြစ်တဲ့သူကလည်း အမေဖြစ်သူကိုအပြစ်တင် … မင်းကလည်းစီးပွါးရေးဘဲလုပ်နေတော့ ငါ့ကိုဘယ်သူကဂရုစိုက်လို့တုန်း
မင်းနေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်အုံး ပစ်စလက်ခတ်ပုံစံကြီးနဲ့ … ဘာညာနဲ့ အတင်း ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာတွေရော ပြောပြီး ကိုယ်လွတ်ရုံးဖို့ ကြံတာပေါ့ ..။
အဲ ကျုပ်လေ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ … သူ့သမီးလေးစကားကြောင့်ပါ ..။ ကျုပ် လန့်လဲလန့်သွားတယ် …။
သားတွေသမီးတွေက အဖေကို အတော်စိတ်နာနေကြပြီလေ ..။
အဖေ .. ဒီလောက် နုနုရွယ်ရွယ်အငယ်လေးတွေကိုမှ သဘောကျရင် မိသားစုထဲမှာဒီလိုပြဿနာတွေလဲမဖြစ်ရအောင် …. သမီးကိုဘဲယူလိုက်ပါလား .. အဖေတဲ့။
အဖေသိပြီးသားဘဲ သမီးက အပျိုစစ်စစ်ပါတဲ့ ……….။
ကောင်းကြသေးရဲ့လား …. ကျုပ်မရေးချင်လှဘူး … ဒါပေတဲ့ သင်ခန်းစာယူကြပါလို့သာပြောပါရစေတော့ ….။
အလိုလေး .. ကလေး က အဲလို တောင်ပြောပလိုက်တယ်လား …..
သူ့စိတ်ထဲမှာ အဖေကို မကျေနပ်ချက်တွေများနေတာ ပေါ့ ။ အင်း နော် ယောကျင်္ားတွေ အကုန်လုံးကို တော့ မဆို လိုပါဘူး ။ တချို့ သော ယောကျင်္ားတွေက ငွေ လည်း ပေါလာပြီ ဆို ရင် ဒီလို ကိစ္စတွေ ဖြစ်ကုန်ကြ တာ များသလိုပဲနော် ။ ငွေ ပိုနေတာ ရယ် အချိန်ပို နေတာရယ်က လူပျက်စီးဖို့ လမ်းစများတယ် ။ ဒီမိသားစု လေး ပြန်ပြီး အဆင်ပြေသွားဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။
Whenawoman is losing her character, she becomes “rich”.
Whenaman is rich, he becomes losing his “character”.
The daughter is very wise.
I wish the father can get the regret by his daughter’ word!!!!!
အဲဒီလို လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုမျိုး မကြိုက်ပါ အားလဲမပေးပါ
တချို့ သူငယ်ချင်းတွေ ငွေကြေးအဆင်ပြေပြီး ကောင်မလေးကိစ္စအတွက် အကုန်အကျခံ ရသမျှ အကုန်အိမ်ပြန်မရောက်လို့ ခင်တာနဲ့ မင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ကွာ ကိုယ့်မှာလဲ မိသားစုနဲ့ သားသမီးနဲ့ပြောမိတာ
ငါတို့လို အခြေအနေမဟုတ်သေးလို့ မင်းဒီလိုပြောတာပါ ငါတို့လို အခြေအနေရောက်ရင် မင်း ဒီစကားပြောဦးမလား ကြည့်ကြသေးတာပေါ့တဲ့
ဘာပြန် ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး သူတို့ပြောတဲ့ အခြေအနေရောက်မှ ထပ်လာပြောမယ် ဗျာ
သမီးလေးကို သနားလိုက်တာ။သူ ့ခမျာကျောင်းစာကြိ ုးစားနေရမှာ အဖေလုပ်သူကြောင့် သနားပါတယ်—သိတတ်လိုက်တဲ့ကလေးလေးပါလားနော်
ဒါတွေက ကိုရီးယားကားတွေ အကြည့်များပြီး နောက်ပိုင်း ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေရယ် မိသားစုတစ်စု အလုပ်ကိုပဲလုပ်ပြီး စီးပွားရေးတက်လာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာတာကလည်း အံ့စရာပါပဲ။ မိသားစုတစ်စုရဲ့ နွေးထွေးမှုလည်း လိုအပ်လှပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က မိသားစုတွေ နားလည်မှုနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးတွေ မပြိုပျက်စေချင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပြောကြတာကိုး ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို မိသားစုတွေ တူတူခံနိုင်ပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကိုတော့ မိသားစုတွေ မခံနိုင်ကြဘူးဆိုတာ ကိုယ်တိုင်က အရမ်းမချမ်းသာလို့လားတော့မသိဘူး။ နွေးထွေးတဲ့မိသားစုအရိပ်ကနေတော့ ဘာနဲ့မှမလဲချင်မိပါဘူး။
ထစ်ကနဲရှိကိုရီးယားကားပဲ လွဲချနေကြတော့တာပဲ … ကိုရီးကားတွေမှာ သင်ခန်းစာယူစရာ တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ် ။လူတွေကိုက မကောင်းတာ … ကိုယ့်မိသားစု ကိုယ့်ဇနီးမယားအပေါ်မှာ သစ္စာရှိရှိမနေနိုင်ကြတာခက်တယ် … သစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးကို အလကားထားထားတာ မဟုတ်ဘူး ။ လက်ကိုင်ကျင့်သုံးဖို့လဲ လုပ်ကြပါဦးလို့ ပုထုစဉ် ယောက်ျား
များ ကိုပြောချင်ပါတယ် ။ မိန်းမများလည်း တူတူပဲ ကိုယ့်လင်ယောက်ျားပေါ်မှာသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်.. ပိုက်ဆံချမ်းသာမှ တိုက်ရှိမှကားရှိမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ လုံ့လဝရီယ နဲ့ စုဆောင်းတတ်တဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်… လို့ထင်တယ်…
မှန်တာပေါ့.ကိုးရီးယားကား ကောင်းတာတွေ များမှများ .. အတုယူစရာတွေ ပေါမှပေါ.. လူငယ်တွေ ကိုးရီးယားကားကြည့်တာ.. ဘာတွေများအတုယူကြသလဲဆိုတာ…
ဆိုလိုတာက .. ကြည့်ပါများလာတော့.. စိတ်ထဲမှာ အဲဒါတွေက အဆန်းမဟုတ်တော့ဘူး
အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်လေ.. ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့ ..မသိစိတ်ထဲမှာ ကိန်းအောင်းသွားတာပေါ့.. (လူတိုင်းဖြစ်နေတာပဲ .. ကိစ္စမရှိဘူး.. ခေတ်ကိုက အဲလိုပဲ..ငါတာဝန်ယူနိုင်ရင် ပြီးတာပဲ ))) အဲလိုပေါ့..
ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အဖြစ်ပျက်မျိုးပါ… ။
ကြားဖူးတာလေးရှိတယ် …ယောကျာ်းတွေက ချမ်းသာတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူးတဲ့.. ချမ်းသာတဲ့အခါ … အပျော်ရှာချင်လာကြတယ် ဒါသဘာဝပဲ … ။ မိန်းမတွေကတော့ ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ … ဆင်းတွင်းနက်လာတဲ့အခါ … ငွေရဖို့ … ခန္ဓာကိုယ်ပဲ ရင်းနှီးကြတယ် … ။
အဓိကကတော့… မိန်းမလုပ်သူ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံ ပါးနပ်ဖို့ လိုတယ် ထင်ပါတယ် …။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း စည်းမရှိကမ်းမရှိ နင်းကန်စားပြီး စည်ပိုင်းပုံပေါက်လာ .. ပိုက်ဆံရှိတော့.. အလှပမရှိလည်း ရတယ်ထင်ပြီး နေချင်သလိုနေ ၊ ပုံပျက်ပန်းပျက်ဖြစ်လာတာကနေ ….. ယောကျာ်းက အပျော်ရှာတော့တာပါပဲ … ။ ယောကျာ်းက များများရှာနိုင်လေ … များများ ဂရုစိုက်ရလေပဲ… မဟုတ်လျှင် … အသီးသီးမှ ခူးချင်တဲ့လူတွေ အများကြီး … ။ ကလေး တဒါဇင်ရှိလည်း အနေစားချောင်လျှင် အငယ်နှောင်းလုပ်မှာပဲ ဆိုတာတွေ ဒီခေတ်တပုံကြီး … ။ ဟိုနွားဦးဏှောက်နဲ့ ကောင်တွေကလည်း … ဒိုးတူဘောင်ဖက် ရုန်းခဲ့တဲ့ မိသားစု အပေါ် ကျတော့ စေတနာမရှိဘူး … ဝူးးးးးးးးးး မောတယ် ..
ယောက်ျားတွေက ချမ်းသာတဲ့ဒဏ် မခံနိုင်ဘူးတဲ့
သမီးလေးက အဖေကို တော်တော်စိတ်နာနေပုံပဲ
ဒီလိုစကားဆိုတာ တော်ယုံပြောသင့်တာ စကားမဟုတ်ဘူးလေ
ယောကျာင်္းအများစုက ချမ်းသာတဲ့ဓဏ်ကို မခံနိုင်ကြဘူးဆိုပင်မယ့်
လွတ်သွားတဲ့ စိတ်လေးကို အသိတရားလေးနဲ့ ထိန်းရင်ရမယ်ထင်ပါတယ် ….
တချို့ကျတော့လည်း သူဌေးသားဆိုပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းကို မကြည့်ပြီး မိဘအရှိန်နဲ့ ပါးပြောင်နေတာကို အထင်ကြီး။ ယူပြီးခါမှ မရှာတတ်ပဲ သုံးပဲသုံးတတ်တဲ့ သူဌေးသားအကြောင်းသိတော့ စားရမလားလို့ ယူမိပါတယ်၊ ပြန်ရှာကျွေးနေရတော့ မကြည်ဖြူ၊ နောက်ဆုံးတော့ အကွဲအပြဲနဲ့ အဆုံးသတ်၊ ဒါမျိုးတွေလည်း ရှိသေးတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အကျင့်စာရိတ္တရော၊ အစွမ်းအစကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား သင့်တာပေါ့။ အိမ်ထောင်မှုဘုရားတည်၊ ဆေးမှင်ရည် စုတ်ထိုးလို့ ဆိုရိုးရှိခဲ့တာပဲ။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားက လူတွေရဲ့ အယူအဆနဲ့ဆိုရင် အဆင်ပြေရင် ပေါင်းကြ၊ အဆင်မပြေရင် လည်း
စိတ်ဒုက္ခခံပြီး နေစရာမလိုဘူး။ ကွာရှင်းလိုက်ကြရုံပေါ့ လု့ိလည်း ကြားဖူးတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်ဖြစ်ရင်ကိုယ်ခံရုံပဲပေါ့။
လောကဓံတရားဆိုတာ ခံနိုင်ရည်ရှိဘို့မလွယ်ပါ။ လူတွေက အဆိုးနဲ့တွေ့ရင် လောကဓံ ခံရတယ်ပြောတယ်။ ဒါကတော့ အကောင်းလောကဓံကို မခံနိုင်တာပေါ့။
သူ့သမီးလေး ပြောတဲ့စကားက ကြားရတာ တော်တော်လန့်သွားတယ်။ ခံစားချက် ဘယ်လောက်ပြင်းထန်နေလဲ မသိဘူး။
သမီးလေးရဲ့ ခံစားချက်ကို ဖတ်ပြီးတော့ လန့်သွားတာပဲ။ ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို ခါးစီး ခံနိုင်ပေမဲ့ ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်တော့ ခံနိုင်ဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့။ မိန်းမက မလှတော့လို့ ဝလွန်းလို့ စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာတော့ အကြောင်းပြချက် မခိုင်လုံလှဘူး။ မလှပေမဲ့ ဝပေမဲ့ သေတပန် သက်တဆုံး ကြင်သူတွေ အများကြီးပါ။ အဓိက ကတော့ မိမိမူရင်းစိတ်နဲ့သာ ဆိုင်မယ်ထင်တာပါပဲ။ အလှအပဆိုတာ စပါးစေ့ တထောက်စာပဲမို့ ဘယ်လောက်လှလှ (၄၀)ကျော်ရင် စပြီး ယိုယွင်းလာတာ ဓမ္မတာမို့ အလှအပကြောင့်လို့ မိန်းမကို အပြစ်ရှာတာတော့ သူ့အပြစ်ဖုံးချင်လို့ တမင်ကို အပြစ်ဖို့တယ် ထင်တာပဲ။
တစ်လင်တစ်မယား စနစ်က အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာ။
အော် ကလေးမလေးသနားပါတယ်၊ သူ့အဖေကို စိတ်နာလွန်းလို့ပြောလိုက်တယ်ထင်တယ်။
မအီးတုံးရဲ့ (အသီးသီးမှ ခူးချင်တဲ့လူတွေ အများကြီး ) ဆိုတဲ့စကားကတော့ ဒီခေတ်အနေအထားနဲ့ ကွက်တိဘဲ။
ဂျပန်တွေ..အိုရှင်းဇတ်လမ်းတွဲကြီးထုတ်တုံးကလည်း.. အာရှတခုလုံး.. အိုရှင်းယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ကုန်တာပဲ..။
ပြောရရင်.. မြန်မာတွေစိတ်တွေခက်ထန်… ရန်လိုကုန်တာ.. မနက်ညည.. တီဗီမှာ.. စစ်ရိပ်..စစ်ငွေ့.. စစ်သီချင်း..စစ်စရိုက်တွေ… တောက်လျှောက်လွှင့်နေတာကြောင့် အများကြီးပါတယ်..။
တပ်မတော်က..လူတွေကိုစိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတာကနေ.. တိုင်းပြည်တပြည်လုံး.. ပြည်တွင်းစစ်နဲ့.. နဘမ်းလုံး… တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့.. အပြန်အလှန်… ချရေးတွေဆီ..ရောက်.. နိုင်ငံကို…ဆွဲချသွားတာပဲ..။
မြင်နေ..ကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေ..ပိုဆိုးပေါ့…။ သူတို့ကြီးလာရင်.. တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်မလည်း.. အသိသာကြီး…။
လက်တွေ့ကျကျ..ပြောရရင်..မြန်မာပြည်..ပြည်မဒေသတွေမှာ… တလင်တမယားစံနစ်ကို ..ဥပဒေနဲ့.. လုပ်သင့်နေပြီ..ပြဌာန်းသင့်နေပြီထင်ကြောင်းပါ..။
တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေကတော့.. သဘောပေါ့..။ “လွင်မိုးခရီးသွားနေသည်”အခွေထဲ..ချင်းကြီးတယောက်မိန်းမတယောက်မက ရှိနေတာသတိထားမိလို့ပြောတာပါ…။
အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော် သူကြီးရဲ့ တီဗီကတော့ ကိုယ့်ဆန္ဒမပါရင် ဘယ်သူမှ မကြည့်ပါဘူး ဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ် မြန်မာပြည်မှာ တစ်ကယ်ဖြစ်နေတာ သီချင်း၊ဇာတ်လမ်း တစ်ခုခု ဖွင့်လိုက်ရင် အရင်ဆုံး လာတာလေး ရှိတယ် “………………………” အဲဒါလာပြီဆို ၃၊၄ နှစ် ကလေးတောင် မှ ကျော် ကျော် ကျော် ဆိုပြီး ထအော် တာ ဘယ်သူမှ သင်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး ပြောချင်တာ က စိတ်မဝင်စားရင် လွှင့်လဲ ပြလဲ ဘယ်သူမှ မကြည့်ဘူး
တလင်တမယားစံနစ်ကို ..ဥပဒေနဲ့.. လုပ်သင့်နေပြီ..ပြဌာန်းသင့်နေပြီထင်ကြောင်းပါ..။
မြန်မာပြည်မှာ မိန်းမနှစ်ယောက် တရားဝင်ယူထားတဲ့သူ (ဘာသာရေးခွင့်ပြုထားတဲ့သူက လွဲလို့) လက်ချိုးရေ လို့ ရမှာပါ အိမ်က မိန်းမကြီး တစ်ယောက်ပဲ တရားဝင်ရှိတာပါ (ဥပဒေအရ ဒီလင်ဒီမယားပါပဲ) စမောလေးတွေက ခင်လို့ ရင်းနှီးလို့ သနားလို့ ညီမလေး လိုသဘောထားပြီး ကူညီတာ ပါ ဆိုတာမျိုး ပြောမှာပေါ့
ဒီကိစ္စက လူ့ကျင့်ဝတ် လူ့စည်းကမ်း ဒါတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်မှာပါ မလုပ်ချင်တဲ့သူက မလုပ်ပါဘူး လုပ်ချင်တဲ့သူက ဥပဒေထုတ်ပြန်ထားလဲ ဘောင်ထဲက အပေါ်က ပြောသလို လုပ်မှာပေါ့
ခံ ယူ တဲ့ သူ ပေါ် တည် မှာ ပါ။ စစ် သား တွေ အ မြဲ တွေ့ နေ တာ နဲ့ ဆိုင် ပါ. မ လား။ ကိုယ့် ရဲ့ စဉ်းစား တွေးခေါ်မှု၊ ပညာ အရည် အ ချင်း၊အ တွေ့ အ ကြူံ၊ စတာ တွေ ပေါ် တည် နေ လိမ့်မယ် ထင် ပါ တယ်။ သူ များ အ ပြစ် တင် လို့ မ ဖြစ် ပါ ဘူး၊ ကိုယ့် ကိုယ် ကို ပဲ ကောင်း အောင် ကြိူး စား ရ မှာ ပါ။
ဟုတ်တယ် သဂျီး …အဲ့ဒီ ချစ်သီတွေး .. ချစ်ဂျီတေးတွေ ကြည့်ပီး … etone စိတ်တွေလည်း ခက်ထန်လာတာလေ…သူတို့ လက်လွှဲလျှောက်တဲ့အခါ ဘယ်လောက် မာန်ပါသလဲနော် .. အဲ့ဒါတွေ ကြည့်ပြီး ထစ်ခနဲဆို … ဒေါသထွက်ရုံမက … နပန်းလုံးချင်စိတ်ကို ပေါက်နေတာပါပဲ… ။
ဟုတ်တယ် သဂျီး …
အဲ့ဒီ (ချစ်သီတွေး .. ချစ်ဂျီတေး) ချစ်သီချင်း တွေ ကြည့်ပီး …
အဲ့ဒါတွေ ကြည့်ပြီး ထစ်ခနဲဆို …
Snowy တို့မိသားစုထဲမှာလဲရှိတယ် … အဒေါ်ရဲ့ ယောကျာ်း ဦးလေးပေါ့ သူတို့ယူပြီးခါစမှာတော့ စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်တယ် … ပြီးတော့တစ်ဖြေးဖြေး စီးပွားရေးခေါင်းပြန်ထောင်လာပြီး လက်ဖျားမှာ ငွေသီးတော့ စမောလေးထားထားတယ်လေ တစ်မျိုးလုံလဲ သိတယ် တရားဝင်ကိုယူထားတယ် သူတို့သမီးအငယ်ဆုံးလေးကဆို ၆ နှစ် ရ နှစ်ပဲရှိသေးတာ …အဒေါ်ရယ် သူ့သမီးနဲ့ နှစ်ယောက်အဖေကို လိုက်ချောင်းတော့ သမီးကစကားအရမ်းတတ်တယ် ဝိုင်းမေးကြည့်တော့ ” ဖေဖေလေ … ကောင်မလေးမိုက်မိုက်လေး နဲ့ကားပေါ်မှာ ပါသွားတယ် ” တဲ့ အဲဒီမှာသားသမီးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အဖေဆိုတာကို လေးစားရကောင်းမှန်း ကြည်ညိုရကောင်းမှန်း မသိတော့တာ အဒေါ်ဆိုရင်လဲ သားသမီးတွေ မျက်နှာနဲ့ ရန်လဲမလုပ်တော့ဘူး … သူလဲစီးပွားရှာ ကိုယ်လဲစီးပွားရှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သားသမီးတွေ နာမည်နဲ့ အားလုံးလုပ်ထားတာ သူပြောတာတော့ မတော်ယောကျာ်းကသေသွားမှ မယားငယ်က အမွေလာလုနေရင်အားလုံးအရှက်ရမယ် သားသမီးတွေမျက်နှာငယ်ရမယ် ….
အမေကပြောတယ် … လောကကြီးမှတဲ့ ဒုက္ခရောက်တော့ မယားကြီးနဲ့ စံတော့ မယားငယ်နဲ့ ဆိုတာသိပ်မှန်တယ်လို့ ပြောတယ်
အလို US မှာ ဘယ်အချိန်မို့လို့ သဂျီး ကွန်မင်း ဝင်လာတာလဲ။
..၃နာရီလောက်အထိက.. ကွန်ပြူတာရှေ့ရှိနေတာပဲ..။.. ပြီရင်..အလုပ်လေးတချို့လုပ်ပြီး.. အိပ်မယ်လေ..။
အဓိကကတော့ လူတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့မြင်ပါတယ်…ချမ်းသာခြင်း၊ဆင်းရဲခြင်းတို့သည် လူတွေရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်၊ကျနော်ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေထဲမှာ ယောက်ကျားကသင်္ဘောသားပါ၊မိန်းမက နှစ်လုံးထိုး၊ပိုကာဆွဲ၊အငယ်လေးလည်းထားကာ ပျော်နေရှာပါတယ်။ယောက်ကျားတွေ ဖေါက်ပြန်တယ် မိန်းမတွေလည်းဖေါက်ပြန်တာအများကြီးရှိကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားဇတ်လမ်းတွေကြောင့်ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ကိုရီးယားဇတ်လမ်းတွေ မြန်မာပြည်မှာခေတ်မစားခင်ထဲက ကိုယ်ကျင့်တရားဖေါက်ပြန်တဲ့သူတွေက ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ…ကျနော်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို သတိပေးစကားလေးပြောလိုက်ပုံက…အေး…”သစ္စာပျက်ရင် စီးပွါးပျက်မှာပဲတဲ့”…အဲဒီစကားကအတော်မှန်တာပဲ …..ကြားထဲက မြေဇာကပင်ကတော့ ကလေးတွေပဲ….ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့ မိသားစုတွေကတော့ အင်မတန်ပျော်ရွင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တာပေါ့…
မရေးချင် ပေမယ့် ရေးလိုက်တော့လည်း ဖတ်လို ့ကောင်းအောင်ရေးနိုင်တာပါပဲ။
ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေပါတယ် ။
နော်လည်း ဒီလို စာလေးတွေ ရေးပါဦး။
ဖတ်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ ကျုပ်တော်တော်အားရှိသွားပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါကြောင်း
… အော် သဂျီးမင်း ဒီလိုဆိုတော့ ဆီးချိုနဲ့နီးပြီ …..။
ဒါမျိုးကငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကဆိုဆုံးမမှု ခံယူချက် တွေးတောဆင်ချင်နိုင်မှု
ဒါကြောင့် တချို့မိန်းမတွေပြောတာ..ငါတို့ယောက်ျားကို မဆင်းရဲစေချင်သလို ချမ်းသာမသွားစေချင်ဘူးတဲ့…သဂျီးပဲကြည့်လေ စနေတနင်္ဂနွေဆို မိန်းမကို ဘုန်းကြီးကျောင်းပို့ ပုတီးစိပ်ခိုင်းပြီ သူကြတော့ ဘီယာနဲ့ကိုဘေးနွားကင်နဲ့ စမောလ်လေးနဲ့…ဖြစ်နေဒါ ဖြစ်နေဒါ…..
ဒီပြဿနာကတော့ အဓိက မိမိမကောင်းတာပါ။ ဟို ပြည်ပ ကိုးရီးယားဇာတ်ကားတွေ ကလည်းပါ ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းကောင်းမှ လင်ကောင်းရတယ် စကားပုံလိုပေါ့။ ကလျာဏ မိတ္တ ကလည်း အတော် အရေးကြီးပါတယ်နော်..။
အော်လောကကြီး လောကကြီး ပြည်စုံနေတဲ့လူတွေကျတော့ လည်း ကိလေသာအပူမီးတွေ ဆက်ပြီးမွှေးလို့ မွှေး ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရနေတာကို အခုတော့ ကိုယ်မွှေးတဲ့ မီးက တစ်စစနဲ့ မီးထတောက်တော့
စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တဲ့ ကလေးမက ပြောမိပြောရာပြောမိတော့….ငရဲပါထပ်ကြီးရပြန်ကော..။
မရှိတဲ့လူကျတော့ မရှိဆင်းရဲခြင်းနဲ့ ဆင်းရဲ ရှိတဲ့လူများကျတော့ လည်း ရှိဆင်းရဲခြင်းနဲ့ ဆင်းရဲပေါ့။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အနေနဲ့ ဆိုရင်.. အခြေခံတရားတော် ဖြစ်တဲ့..
ငါးပါးသီလကို လုံအောင်ထိန်းနိုင်ရင် .. အဲလိုတွေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးထင်တယ်..
ဖြစ်လည်း နည်းနည်းပေါ့..အဲလောက် မများတော့ဘူးပေါ့.. အဓိကတော့ .. ဘာသာရေးအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်မှု နည်းပါးတာလည်းပါလိမ့်မယ် .. ကံရဲ့အကျိုးကို ယုံကြည်သက်ဝင်ခြင်းမရှိတာတွေပေါ့.. အဲဒါတွေ အပထားပါဦးဗျာ.. သူဌေးတွေအနေနဲ့ .. နည်းနည်းကိုယ်ချင်းစာကြပေါ့.. ငါကအခုချိန်မှာ သူဌေးမို့လို့ ..ဒီလိုသုံးဖြုန်းနိုင်တာ.. ငါတစ်ချိန်ကျရင်မွဲသွားရင် ငါ့သားသမီး (အထူးသဖြင့် သမီး) ကို
သူများတွေ အဲလို လာမစော်ကားဘူးလို့ မပြောနိုင်ဘူး.. အဲလိုသာတွေးတတ်ရင်ကောင်းတာပေါ့.
စမောလ်လေးတွေအနေနဲ့လည်း… ကိုယ်ချင်းစာတရားလေး ထားကြရင်ကောင်းမှာ.. ငါ့အနေနဲ့ အခုဘဝမှာ ဒီလို ယုတ်ညံ့တဲ့ဘဝမှာအသက်ရှင်ရတာ အရင်ဘဝက သူများအပေါ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ .. အခုလည်းငါသာဆက်လုပ်ရင်.. နောင်ဘဝလည်း .. ဆက်ဖြစ်ဦးမှာ .. အဲလိုတွေးတတ်ရင်ကောင်းမှာဗျ.. ဒါပေမယ့် အဲလိုအမျိုးသမီးတွေက .. အဲဒီဘဝကို ယုတ်ညံ့တယ်လို့ကော..ထင်ကြရဲ့လားမသိပေါင်ဗျာ..